Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » 10 khaladaad gegida dayuuradaha oo lacag kugu kacaya
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Adiga oo aan ka tagin waqti kugu filan oo aad ku tagto gegida diyaaradaha, iska soo gasho oo aad ka gudubto amniga, waxaad halis ugu jirtaa inaad seegto duulimaadkaaga. Tani waxay si gaar ah qaali u tahay haddii aad ku ballansatay diyaarad aan bixin lacag celin.
Waxaa muhiim ah in la xusuusto in garoomo diyaaradeed badan ay ka qaadaan dadka safarka ah dhibcaha taleefanka.
Hubi inaad diyaarsato cuntooyinkaaga gaarka ah kahor duulimaadka si aad u keydiso lacag aad isticmaasho marka aad gaarto meesha aad u socoto.
Lacagtaada ku beddel waqti badan kahor intaadan imaan garoonka diyaaradaha safarkaaga.
Annaga oo in badan oo naga mid ah aan safarkii ugu horreeyey ee caalami ah ku aadnay muddo aad u dheer, khubarada socdaalka ayaa daaha ka qaaday 10 khalad oo madaarka ka dhaca oo kharash kaaga baxaya safarkaaga.
1. Qaadashada taksi
Markaad tagsi u raacdo gegida dayuuradaha ayaa laga yaabaa inay u muuqato mid ku habboon, tagaasida taga garoonka had iyo jeer waa qaali, gaar ahaan waqtiyada ugu sarreeya. Si aad kharashka hoos ugu dhigto, hubso inaad horay u sii ballansato wareejinta gegida dayuuradaha, habkaas ma aha inaad fadhido adigoo daawanaya mitirka oo kor u kacaya! Haddii kale, fiiri si aad u ogaato haddii ay jiraan basas u socda garoonka diyaaradaha, maaddaama kuwani ay ka jaban yihiin una fiican yihiin deegaanka.
2. Illowga dhaladaada biyaha ee la buuxin karo
In kasta oo ay u ekaan karto wax yar in la xasuusto inaad xirxirto, illowday inaad qaadato dhalo biyo oo madhan, oo la buuxin karo iyada oo loo marayo amniga ayaa kugu kici karta mustaqbalka fog. Guud ahaan, dukaammada gegida dayuuradaha ayaa aad qaali u ah in lagu shaqeeyo, sidaa darteed qiimayaashu badanaa waa badan yihiin.
Inta badan garoomada yeelato saldhigyo biyo oo lacag la'aan ah oo aad ka buuxin karto dhaladaada marka aad ka gudubto amniga. Qaadashada dhaladaada dib loo isticmaali karo, ma aha oo kaliya inaad keydiso lacag laakiin sidoo kale waxaad wax u qabaneysaa deegaanka.
3. Baabuur dhigashada madaarka
Dad badan ayaa doorta baarkin dhigashada goobta garoonka maxaa yeelay waxay u haystaan ​​inay dhowdahay oo habboon tahay. Si kastaba ha ahaatee, baarkinka gegida dayuuradaha ayaa qaali ah, mararka qaarkoodna, baarkinka gegida dayuuradaha ayaa xitaa ku kici kara wax ka badan tigidhka diyaaraddaada.
Kaliya ma aha mid qaali ah, laakiin baabuurkaagu waxaa laga yaabaa inuusan aad u sugnayn, maadaama uu bannaanka uga tagay si uu ula kulmo walxaha, waxaana jiray kiisas badan oo la diiwaangeliyey oo ku saabsan baabuur soo laabanaya oo waxyeelloobay.
Waxaad badbaadin kartaa waqti iyo lacag adoo fiirinaya seeraha kala duwan, seexashada iyo xulashada duullimaadyada. Kuwani waxay kuu oggolaanayaan inaad si badbaado leh baabuurkaaga u dhigato hoteelka muddada safarkaaga, aad hoteelka seexato habeen ka hor oo weliba kaa dhoofiso oo ka soo dhoofto gegida dayuuradaha. Xulashada baarkinka, xulashada duulimaadka hurdada ayaa ku siineysa qiime aad uga tartan badan baarkinkaaga.
4. Inaan hore loo sii qorsheyn
Waxaan wada ognahay in garoomada diyaaradaha ay mashquul ku noqon karaan, oo leh khadad amni oo si tartiib-tartiib ah u socda iyo dib-u-dhacyo kale, marka waxaa muhiim ah in la qorsheeyo safarkaaga garoonka oo aad naftaada siiso waqti badan kahor duulimaadkaaga.